Don xigasho xigashooyin xigmad suuq ah | Martech Zone
Don Draper Xigasho Xigmad Suuq geyn
Khamiis, Maarso 13, 2014 Khamiis, Maarso 13, 2014 Douglas Karr
Ma aqrin cida qorayaashu ka mid yihiin Niman waalan, laakiin shaki kuma jiro inay leeyihiin qaar ka mid ah folks shaqaalahooda oo ka soo shaqeeyay warshadaha suuq geynta. Waxaan u maleynayaa inay qasab ku aheyd inay ceshtaan carada ay ka qabaan warshadaha sanadihii la soo dhaafay oo ay ku badbaadiyeen midkan, dabeecada cajiibka ah ee uu ciyaaray Jon Hamm.
Waa kuwan qaar ka mid ah kuwa aan ugu jeclahay Don xigasho:
Dadku waxay kuu sheegaan cidda ay yihiin, laakiin waan iska indhatireynaa sababtoo ah waxaan dooneynaa inay noqdaan kuwa aan dooneyno inay noqdaan.
Dadku waxay rabaan in loo sheego waxa ay ku kacayaan si xun si ay u dhageystaan ​​cid kasta.
Waxaad tahay sheyga. Waxaad dareemaysaa wax. Taasi waa waxa iibiya. Iyaga maahan. Ma aha galmo. Ma sameyn karaan waxa aan sameyno, waana nagu neceb yihiin taas.
Xayeysiintu waxay ku saleysan tahay hal shay, farxad. Oo miyaad ogtahay waxa ay tahay farxad? Farxaddu waa urta baabuur cusub. Waa xor ka cabsasho. Waa boor ku yaal wadada dhinaceeda oo ku qaylinaysa kalsooni ku qabta in wax kasta oo aad samaynaysaa ay caadi yihiin. Waad fiicantahay
Tani infographic cajiib ah, Don Draper Moments of Wisdom Marketing wuxuu ka yimid Glow Media Cusub.
Tags: don draperha soo qaadan xigashooyinkajon hammxigashooyinka jon hammniman waalanniman waalan xigasho
Waa kuwee Baraha Bulshadda ee Bulshadeynta ugu Badan?